राजलाई देखेर शिल्पाले आफ्नो होस गुमाइन्, यो सब किन र कसका लागि गर्यौ भन्दै गरिन विवाद ? – Sandesh Press
July 28, 2021 201
जेन्सी । अ श्लि ल फिल्म बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका राज कुन्द्रालाई जब प्रहरीले शिल्पाको अगाडी ल्याए त्यती बेला बलिउड नायीका शिल्पा सेट्टीले देखाएको प्रतिकृयाले प्रहरी पनि छक्क परे । प्रहरीले राजको व्हाट्सएप च्याट, फोन कल, प्रत्यक्षदर्शीहरुका बयानहरु सबै गोप्य कुरा गोप्य रहेको छ। राजकी श्रीमती अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीलाई २३ जुलाईमा यहि विषयमा प्रहरीले बयान लिएको थियो ।
Prevविवाह पछि किन मोटाउछन् महिला ? अर्थोक नसोच्नुहोस् कारण यस्ता छन्
Nextमधुमेहमा पनि गुलियो खान सकिन्छ, यी हुन् विकल्प
को हुन् यी सुन्दरी ? के उनले एक रातमै पाकिस्तानी सरकार ढाल्न सक्छिन् ?
कठै ! जनयुद्धमा दुवै हात र आखा गुमाए,बदलामा जम्मा ४१ हजार पाए,यस्तोसम्मको बि जोग (भिडियो हेर्नुस्)